TP620 Car TPMS ကြိုးမဲ့တာယာစနစ်စီးကရက်ပေါ့ပါးပါဝါနှိုးစက်စနစ်များနှင့်အတူ4ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပအာရုံခံကိရိယာ – Professional ကအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံ|ကားအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထောက်ပံ့
Size/Distance 52*37*72MM >30မီတာ >30မီတာ
4.အလေးချိန်: External Sensor 179g/set; Internal Sensor 339g/set
ISO9001 လွန်:2008 and AMECA quality system authentication and ROHS authentication.
1.Specializing in auto parts for 10 နှစ်ပေါင်း.
3.Precisely manufactured and 100% ပေးပို့မီစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်.
က: ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်မီးပွားများဖြစ်သည်, လောင်စာဆီ injectors, စက်နှိုးကွိုင်, အောက်စီဂျင်အာရုံခံကိရိယာ, ကားချိုများ, အလင်းအိမ်, အာရုံခံကိရိယာ, ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ.
က:Payment terms is T/T or L/C.
က: The delivery time is 45-65 ရက်ပေါင်း.
က: Able to processing with supplied samples and trademark.
က: Different products have different MOQ.
က: Available to use customers packing box with customer brand. Competitive price and reliable quality among peer marketplace.